Qeexitaanka sicir bararka: waa maxay, goorta ay dhacdo iyo sida loo xakameeyo | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Imisa jeer ayaan maqalnay sicir bararka, dhibaatada, sida wax waliba qaali u yihiin iwm. Maanta dad badan ayaa taas og sicir bararku wuxuu la xiriiraa kor u kaca qiimahaLaakiin markaan ka hadlayno sicir bararka sare, maxaan uga jeednaa? Si loo cadeeyo su’aashan, waxaan u hibeynay qodobkaan qeexitaanka sicir bararka.
Marka laga reebo sharaxaadda waxa ifafaalahan, waxaan sidoo kale ka faalloon doonnaa goorta ay dhacdo iyo sida loo xakameeyo. Haddii aad xiisaynayso mawduuca oo aad rabto inaad wax badan ka ogaato sicir bararka, waxaan kugula talinayaa inaad sii wadato akhriska.
1 Waa maxay sicir bararku?
2 Goorma ayaa la sheegaa inuu jiro sicir barar?
2.1 Nolol maalmeedka
3 Sidee loo xakameynayaa sicir bararka?
Kahor intaanan ku siinin qeexitaanka sicir bararka, aynu marka hore cadeynno fikradda sicir bararka caadiga ah. Waa geeddi-socod dhaqaale oo soo baxa marka dheelitir la'aan u dhexeyso baahida iyo wax soo saarka. Xaaladahaas oo kale, qiimaha badeecadaha iyo adeegyadu badankood si isdaba joog ah ayey kor ugu kacayaan halka qiimaha lacagta ay hoos u dhacayso, taas oo ah, awoodda wax iibsiga oo hoos u dhacday.
Marka aan ka hadlayno sicir bararka sare waxaan ula jeednaa waqti aad u dheer oo sicir barar aad u sareeya oo lacagta ay lumiso qiimaheeda isla markaana qiimaha uu sii wado inuu kor u kaco si aan la xakameyn karin. Waqtigan xaadirka ah kororka aan la xakamayn ee bixinta lacagta iyo rabitaan la'aanta dadwaynuhu inay hayaan lacagta la qiimeeyay ayaa isku soo beegmay, geeddi-socodkan dhaqaale ayaa in badan muuqda. Guud ahaan, marka waddan xaaladan ku jiro, dadku waxay doortaan inay lacag ugu beddelaan hanti ama lacag shisheeye si ay u haystaan ​​wax qiimo leh. Si kasta oo ay tani u xun tahay, xaaladdu way ka sii dari kartaa. Haddii bangiga dhexe uusan awoodin inuu la baxo lacagtii lagu duray intii lagu jiray xiisadda, muuqaalkan oo dhan wuu sii xumaanayaa.
Intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad, iyo ilaa maanta, waxaa jiray marar badan oo sicir barar sare. In kasta oo ay hore u ahaayeen dhacdooyin aad u ba'an, ilaa maantadan la joogo waxay sii wadaan inay si weyn u saameeyaan dhaqaalaha adduunka. Taariikhda oo dhan, dhacdooyinka qaarkood sida dhibaatooyinka lacagta, xasilloonida bulshada ama siyaasadeed ee waddan ama isku dhacyada milatari iyo cawaaqibyadooda waxay si dhow ula xiriireen sicir bararka.
Goorma ayaa la sheegaa inuu jiro sicir barar?
Sanadkii 1956, Professor-ka dhaqaalaha ee Jaamacadda Columbia Phillip D. Cagan wuxuu soo jeediyay qeexitaanka sicir bararka. Sida laga soo xigtay isaga, dhacdadan waxay dhacdaa marka sicir bararka billaha ahi ka bato 50% oo dhammaado marka sicirkani ka hooseeyo 50% ugu yaraan hal sano oo xidhiidh ah.
Waxaa sidoo kale jira qeexitaan kale oo ku saabsan sicir bararka oo laga aqbalo caalamka. Tan waxaa bixiya Heerarka Warbixinta Maaliyadeed ee Caalamiga ah (IFRS). Waxay ka mid tahay Guddiga Heerka Xisaabaadka Caalamiga ah (IASB) wakiilladooduna waa kuwa go'aamiya xeerarka xisaabinta caalamiga ah (IAS). Sida laga soo xigtay iyaga, waddan wuxuu marayaa sicir barar xad dhaaf ah marka sicir barar is biirsaday lagu daro in ka badan 100% muddo seddex sano ah.
Sida nolol maalmeedka, waxaan ogaan karnaa saameynta sicir bararka ee xaaladaha kala duwan ama dabeecado kala duwan awgood. Dukaammada, tusaale ahaan, xitaa way beddeli karaan qiimaha alaabada ay iibiyaan dhowr jeer maalintii. Maxaa intaa ka badan, guud ahaan dadku waxay bilaabaan inay lacagtooda ku kharash gareeyaan badeecada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, si aan loo lumin awooda wax iibsiga. Xitaa waa iska caadi inay iibsadaan, tusaale ahaan, qalabka guryaha xitaa haddii aysan u baahnayn.
Dhacdo kale oo had iyo jeer dhacda ayaa ah in qiimaha badeecadahu ay bilaabmayaan in lagu tirakoobo lacag shisheeye oo xasiloon, maadaama tan gudaha aysan ahayn. Xaaladaha qaarkood isweydaarsi iskaa wax u qabso ah ayaa la abuuray. Si kale haddii loo dhigo: Dadku waxay doorbidaan inay keydkooda dhigtaan oo ay wax ku kala iibsadaan lacagaha qalaad markasta oo ay suurtagal tahay.
Sidee loo xakameynayaa sicir bararka?
Xakamaynta sicir bararka sare waa mid adag oo in badan oo dadka ka mid ahi ma haystaan ​​wakhti fiican inta lagu jiro dhacdada oo dhan. José Guerra, oo ah dhaqaaleyahan iyo kuxigeen ka tirsan Golaha Qaranka, wuxuu magacaabay wadar ahaan shan tallaabo oo la qaadi karo si loo joojiyo aafadan dhaqaale, sida uu qeexayo sicir bararka. Waxaan hoos ka faalloon doonnaa iyaga:
Xakamaynta maaliyadeed: Waa inaadan ku bixin lacag ka badan intii loo baahnaa oo aad yareyso kharashyada aan mudnaanta laheyn ee dalka laga hadlayo.
Ha soo saarin lacag badan oo aan dabiici ahayn. Sida laga soo xigtay José Guerra, "lacag kasta iyo lacag kasta oo dalka ka jirta waa in lagu taageeraa wax soo saarka qaranka si ay u ahaato mid deggan."
In meesha laga saaro xakameynta sarrifka. La'aanteed, qulqulka lacagaha qalaad waa la ogolaan karaa markale.
Ka takhalus caqabadaha hortaagan maalgashiga gaarka ah. José Guerra wuxuu rumeysan yahay in soo dejinta iyo dhoofinta bilaashka ah la oggol yahay sidaasna lagu hubinayo xorriyadda ganacsiga.
Waxaan rajeynayaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad sifiican u fahamto waxa sicir bararka sare yahay iyo sida ay u shaqeyso. Asal ahaan waa sida sicir bararka, laakiin waa ka buun buunin badan yahay. Daraasad taxaddar leh oo ku saabsan dhaqaalaha waxaan arki karnaa iyada oo soo socota oo aan isku dayno inaan si habboon u diyaarinno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Qeexitaanka sicir bararka
Sepe: xogta kala geddisan